सम्राज्ञी र भुवन केसीको विबाद चर्किदै, के साम्राज्ञीले लगाएका आरोप सबै सत्य हुन् ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
सम्राज्ञी र भुवन केसीको विबाद चर्किदै, के साम्राज्ञीले लगाएका आरोप सबै सत्य हुन् ?
काठमाडौँ । साम्राज्ञीको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जवाफ दिदै नायक भूवन केसीले जुन थालमा खाने त्यही थालमा प्वाल पार्ने भनेर जवाफ दिएका थिए । अब, साम्राज्ञीले भूवनको यो भनाइको पनि जवाफ दिएकी छिन् । भिडियोमार्फत जवाफ दिने क्रममा साम्राज्ञीले जापानमा आयोजित एक अवार्डमा सहभागी हुने क्रममा नायक केसीले आफूमाथि नराम्रो व्यवहार गरेको पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।
साम्राज्ञीले भनेकी छिन्–‘तँ त मेरो प्रोडक्ट हो । अब पुरानो कुरा कोट्याएर के फाइदा, तँ एउटा ठाउँमा पुगिसकिस्, अब यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर संझाउनुभयो । त्यतिबेला मलाई भित्रैदेखि घिन पनि लागिरहेको थियो । तै पनि म हाँसेरै बोलेको थिएँ ।’ यो पनि पढ्नुहोस साम्राज्ञी भन्छिन्–‘फिल्ममा काम गर्दा निकै नराम्रो अनुभव भोगेकी छु’ हेर्नुहोस पुरा भिडियो
काठमाडौँ । चलचित्रज्ञ ड्रिम्स मार्फत नायक नायक भूवन केसीले नायिका सँगको विवादपछि साम्राज्ञीमा उस्तै विश्वास,
‘के माया लाग्छ र’ की गायिका एलिना चौहानको अर्को गीत बाहिरियो